ဇာတိမြေ (သို့မဟုတ်) အိမ် | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 20, 2008, 9:08 am
မမစိုးဝှက်က အားရပါးရ အကြောင်းအရာနှစ်ခုတောင် Tag လုပ်လိုက်တော့ ပထမတစ်ခုကို ကျွန်မ အရင်ဆုံးရေးရပါတော့တယ်။ ပထမတစ်ခု Tag ထားတာက ဇာတိမြေ(သို့မဟုတ်)အိမ်တဲ့ .. ။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရင် ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဆိုတာကို အရင်ရေးချင်တာပါ 😛 ။ အကြွေးတွေပုံသွားမှာစိုးလို့ ပထမတစ်ခုကို အရင်ရှင်းလိုက်ပါပြီ။
၄) မောင်လေးထူးမြတ်တို့ကို TAG လုပ်လိုက်ပါတယ် 🙂
Loving this post..,
Thanks for sharing your feeling. Keep going Pal!!
Comment by SMNTL March 20, 2008 @ 7:00 pm
ဖတ်ရတာ ရင်ထဲနင့်သွားတာပါပဲ လင်းရေ။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ။
Comment by စိုင်းကျော်စွာ March 22, 2008 @ 2:12 am
ပခူးရွေမောဓော ဘုရား တစ်ခေါက်ပဲရောက်ဖူးတယ်
ဒါတောင် လမ်းကြုံလို့ဝင်လိုက်တာ ..
နီးရက် နဲ့ဝေး ဆိုတာမျိုးပေါ့
Comment by နှင်းပွင့်ဖြူလေး March 24, 2008 @ 9:54 am
လင်းလက်ရေ…ပဲခူးကအိမ်လေးက တကယ့်လွမ်းစရာလေးနော်။ တကယ်ရောက်သွားသလို ခံစားရအောင်ရေးနိုင်တယ်။
Comment by တန်ခူး March 25, 2008 @ 2:07 am
Sis Lin lett!!! I really miss my hometown when i read about your hometown!! I do wanna go back!!
Comment by YeKyawAungMDY March 25, 2008 @ 7:54 am
နေ့သစ်တွေမှာ အမြဲလှပနိုင်ပါစေ…. အချိန်တန်ရင်တော့ အိမ်ပြန်ရမှာ… ဒါပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းသာယာနေရင်တော့ ပိုပြီးပြည့်စုံမှာပါ…
တို့မောင်နှမတွေ တနေ့တော့ … လှပခြင်းတွေ ပွင့်ဖူးမယ့် ဇာတိမြေမှာပြန်ဆုံကြပါစို့…
Comment by ပြည့်စုံ March 26, 2008 @ 6:21 am
This is the 3rd blog today i had reading about home and it’s really nice n I miss my mother home (Burma). And hope , one day we will be together again somewhere in Burma.
It’s also remind me the sound name ( mother house ) which famous during 1969~70 in Burma.
I would say ” no place like mother home “.
Comment by Tin March 29, 2008 @ 2:10 pm
အ ကို တွေ..အ မ တွေ ရဲ့ အလယ် အမေ က ကျမ ကို ပို ကာ အထွေး ဆုံး မို့ချစ် တယ် ချစ် တယ်…
ဒီ သီ ချင်း လေးဟာ ဟိုး………လွုန်ခဲ့သော နှစ် ၃၀ လောက်က မြန်မာ့အသံကနေ လာနေ ကြ သီ ချင်း လေး ပါ..
Comment by Tin March 29, 2008 @ 11:09 pm